घेरा हाल्दै राजधानी किभ नजिकै पुग्यो रुसी सेना, राष्ट्रपतिको जेलेन्स्कीको अवस्था के छ ? — Imandarmedia.com
घेरा हाल्दै राजधानी किभ नजिकै पुग्यो रुसी सेना, राष्ट्रपतिको जेलेन्स्कीको अवस्था के छ ?
किभ। रुसी फौज युक्रेनको राजधानी किभनजिकै पुगेको छ। उत्तर, पश्चिम र उत्तरपूर्वबाट घेरा हाल्दै रुसी फौज किभनजिकै पुगेको हो। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अ‌ाफ्ना सेनासँग दशकौंपछि ठूलो क्षति सामना गरेपछि रुसले नयाँ फौजहरु युक्रेन परिचालन गरेको बताइरहेका बेला रुसी सेना किभनजिकै पुगेको हो।
दश जनाको समूहले मेलिटोपोलका मेयर इभान फेडोरोभलाई अपहरण गरेको छ, युक्रेनको संसदले ट्विटरमा भनेको छ, उनले दुश्मनसँग सहयोग गर्न अस्वीकार गरे। दक्षिणी बन्दरगाह सहर मारिओपोलमा रुसी सेनाले भीषण हमला गरेका छन्।
रुसी फौजले घेरा गरेको सो सहरमा निरन्तर गोलाबारी र बम हमला भएका छन्। मारिओपोलमा हरेक ३० मिनेटमा गोलाबारी भइरहेको सो सहरका मेयरले बताएका छन्। सो सहरमा १२ सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
खाद्यन्नको अभावमा मानिसहरु भोकभोकै बाँच्न बाध्य भएका छन्। शहरका सडकमा मानिसका शव यत्रतत्र छरिएका विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन्। मारिओपोलमा बिगत ११ दिनदेखि पानी र बिजुली नभएको स्थानीयले बताएका छन्।
रुसी सेनाले तीनवटा क्षेप्यास्त्रहरूले शुक्रबार मध्य शहर डिनिप्रोमा नागरिक भवनमा प्रहार गरेका थिए। हमलामा एउटा जुत्ता कारखाना ध्वस्त हुनुका साथै एक जना एक सुरक्षा गार्डको मृत्यु भएको थियो।
रुसले २४ फेब्रुबरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेदेखि छिटपुट हमलामा परेको डिनिप्रोलाई यसअघि सुरक्षित आश्रय मानिएको थियो।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस र युक्रेनबीचको लडाइँमा १३ सय युक्रेनी सेना मारिएको बताएका छन्। २४ फेब्रुवरीदेखि भएको रुसी हमलामा आफ्ना १३ सय युक्रेनी सेना मारिएको उनले बताएका हुन्।
त्यस्तै, करिव ५०० देखि ६०० रुसी फौजले युक्रेनी सेनासमक्ष आत्मसमर्पण गरेको उनले दाबी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच, युक्रेनको राजधानी किभबाट दक्षिणमा रहेको एउटा सैन्य आधारमा रुसी सेनाले मिसाइल प्रहार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याँक्रो र जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्धबिराम गर्न आग्रह गरेका छन्। यसैबीच, राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले देशका नागरिकहरूलाई दिइने सर्वोच्च सम्मान ’युक्रेनको नायक’ उपाधि प्रदान गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
तेस्तै, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन डिमेन्सिया, पार्किन्सन्स र क्यान्सरको स्टेरोइड उपचारका कारण हुने ‘रोइड रेज’ बाट हुने ब्रेन डिसअर्डरबाट पीडित भएको खुफिया स्रोतले दाबी गरेको छ।
यी केवल मानव स्रोतहरू हुन, जसले तपाईंलाई पुटिनको मानसिकताकोे समृद्ध चित्र प्रदान गर्न सक्छ’ सुरक्षा स्रोतलाई उदृत गर्दै बेलायती समाचार संस्था डेलीमेलले लेखेको छ, ‘विगत पाँच वर्षमा उनको निर्णय शक्तिमा निश्चित परिवर्तन आएको छ।
पुटिनको वरपरका मानिसहरूले उनी के भन्छन् र उनी आफ्नो वरपरको संसारलाई कसरी बुझ्छन् भन्ने कुराको सहजता र स्पष्टतामा उल्लेखनीय परिवर्तन देख्छन्।